कुन बाटो भ्रमण वर्ष ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
कुन बाटो भ्रमण वर्ष ?
सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर सरकारले झ्याली पिटेको पिट्यै छ  । त्यसका लागि अपेक्षित तयारी चाहिँ कछुवा गतिमा चलिरहेको छ  ।
जस्तो— भैरहवा–लुम्बिनी सडक । लुम्बिनीलाई पर्यटकको मुख्य गन्तव्यका रूपमा हेर्ने गरिन्छ तर भैरहवादेखि लुम्बिनी जोड्ने सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने समय तीनै तहका सरकारमा भए जस्तो लाग्दैन । यो सडक विस्तारमा विवाद भए जस्तो लाग्दैन तर निर्माणले किन गति लिन नसकेको हो, बुझिनसक्नु छ । सडक नै स्तरीय नभए पर्यटक कसरी आउँछन् ? आएकाले पनि कस्तो धारणा बनाउलान् ? लुम्बिनीको कस्तो प्रचार गर्लान् ? उक्त सडकमा उड्ने धूलोले स्थानीय बासिन्दालाई कति कष्ट दिएको छ, त्यो भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ । सडककै दुरवस्थाका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । भ्रमण वर्ष सुरु हुन अब छ–सात महिना मात्र बाँकी छ, त्यहीबीच बर्खा सुरु हुँदै छ । बर्खायाममा सडक विस्तार प्रभावित हुन्छ नै । भ्रमण वर्षको भविष्य अँध्यारै छ ।
– विजय भट्टराई, भैरहवा, रूपन्देही
प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०९:४०
कटहरियामा आयोजित जानकी जयन्तीमा राष्ट्रपतिको स्वागतार्थ विद्यार्थी बालबालिकालाई चर्को घाममा उभ्याएको घटनाले गणतन्त्रप्रति हस्यौली गरेको छ  । गणतन्त्रकालीन उच्चपदस्थहरूको स्वागतमोहले राजसंस्थाको स्मरण गराएको छ  ।
राष्ट्रपतिदेखि मन्क्रीसम्म कार्यत्रममा बिदामा बसेका विद्यार्थीहरूले स्कुल पोसाकमा स्वागतमा खडा गर्ने यो कस्तो चलन हो ? कहिले राष्ट्रपतिका लागि भनेर विमानस्थलमा देश–विदेशका विमानलाई अवतरण गर्न नदिने, कहिले प्रधानमन्त्रीको सवारीका नाममा बिमारीले बाटामै मृत्यु पर्खनुपर्ने अवस्थाले आमजनमा गणतन्त्रप्रति विरक्ति उत्पन्न गराएको छ । विगतमा जनताले यिनैलाई भुरेटाकुरे राजा बनाउन असली राजतन्त्रविरुद्ध धावा बोलेका थिए ? सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला भइसकेको छ । पात्र परिवर्तन भए पनि कुसंस्कारले अझै निरन्तरता पाइरहे जनताको धैर्यको बाँध भत्किन बेर लाग्दैन । समय छँदै चेत पलाओस् ।
– रामकृष्ण बराल, जोरपाटी २
शिक्षाको गुणस्तर घट्दो
शिक्षक नियुक्तिको गाईजात्रा
हचुवामा विश्वविद्यालय नखोलौँ
सार्वजनिक अभिलेखका लागि नयाँ मन्त्रीका विशेषता
आरक्षणमा जाति होइन, वर्ग